तपाईको क्षेत्रमा शाखारहित बैंकिङ छ ? यस्ता सुविधाहरु लिनुहोस् – Banking Khabar
तपाईको क्षेत्रमा शाखारहित बैंकिङ छ ? यस्ता सुविधाहरु लिनुहोस्
यस्तो सेवाबाट स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न निक्षेप खाता खोल्ने, तोकिएको सीमासम्मको रकम जम्मा गर्ने तथा झिक्ने, मोवाईल रिचार्ज गर्न, उपयोगी सेवा जस्तैः टेलिफोन, मोबाईल, एडिएसएल, डिस होमको महशुल भुक्तानी गर्ने, स्वीकृत सिमा भित्र रहि कर्जा कारोबार गर्ने, कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न सक्ने, खातामा रहेको रकमको जानकारी र संक्षिप्त बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
शाखा नभएका ठाउँमा शाखारहित बैंकिङ
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक र ‘ख’ वर्गका विकास बैंकले शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछन् । विकास बैंकहरुमा हालसम्म ओम डेभलपमेन्ट बैंकले मात्रै शाखारहित बैंकिङ सुरु गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले भने शाखारहित बैंकिङलाई प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाबाहेक शाखा नभएका क्षेत्रमा शाखारहित सेवा विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।